#NyRarinyHoan’IAsifa: Tohina Tamin’ny Famonoana Ny Tovovavy Iray Ny Mponina Tao Jammu Sy Kashmir Saingy Tsy Toy Izany Kosa Ny Fampitam-baovao Nasionaly · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Febroary 2018 6:29 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Français, Español, русский, ਪੰਜਾਬੀ, English
Raha mbola mitolona amin'ny fitsarana momba ilay tompon'andraikitra tamin'ny famonoana ilay zazavavy kely fito taona Zainab Ansari i Pakistana dia efa nisy sahady ny famonoana tamin'ny fomba habibiana iray hafa tany amin'ny sisintany, any amin'ny fanjakana Indiana avaratra any Jammu sy Kashmir izay nahatohina ny mponina tao an-toerana.
Tamin'ny 17 Janoary, hita tao anaty ala iray tany amin'ny faritra Hiranagar, any Jammu sy Kashmir, any amin'ny distrikan'i Kathua ny vatana mangatsiakan'ilay zaza valo taona Asifa Bano novonoina. Nilaza ny tati-baovao tao amin'ny gazety tao an-toerana tao Kashmir fa toa niharan'ny fanolanana sy nampijaliana i Asifa talohan'ny namonoana azy, ary nisy marika vono nataon'olombelona teo amin'ny vatany.
Tsy hita nandritra ny herinandro i Asifa Bano talohan'ny nahitana ny vatana mangatsiaka. Nilaza tamin'ny fampitam-baovao tao an-toerana ny fianakaviany fa nitatitra avy hatrany ny vaovao izy ireo rehefa tsy hita izy ,kanefa nilona loatra ny fanadihadiana nataon'ny polisy momba ny fanjavonany. Anisan'ny foko mpifindrafindra monina Gujjar-Bakarwal i Asifa sy ny fianakaviany.
Samy nitaky ny fitsarana ny famonoana an'i Asifa tamin'ny fomba habibiana avokoa na ireo manampahefana tao an-toerana na ny olom-pirenena na ny mpanao gazety tao Jammu sy Kashmir ary nampitaha ny zava-misy mitovy tamin'ny famonoana an'i Zainab Ansari tao Pakistana. Misy ihany koa ny fitakian'ny vahoaka ny rariny ho an'ilay zaza.
Hoy i Shujaat Bhukari, toniandahatsoratry ny Rising Kashmir monina ao Kashmir raha nanoratra hoe:
Nisaintsaina momba ilay zava-nitranga sy ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina i Nadir Ali, mponina ao an-toerana:
Nanakiana ireo gazety fampitam-baovao tao an-toerana izay tsy nahavita nitatitra ilay raharaha ny mpanao gazety Majid Hyderi tao amin'ny Facebook:
Mbola nanao fanamarihana manandanja indray i Hyderi momba ilay vono olona sy fanolanana mahatsiravina:
Tao amin'ny Antenimieran'ny Jammu sy Kashmir, nikarakara fihetsiketsehana diabe manohitra ilay famonoan'olona ny antoko politika mpanohitra, National Conference (NC) raha nanambara kosa ny antokon'ny fitondrana fa hanao fanadihadiana haingana. Nanameloka ilay zava-nitranga ny lehiben'ny minisitra ao Jammu sy Kashmir, Mehbooba Mufti, ary nitaky ny hanaovana fanadihadiana haingana. Ankizilahy iray 15 taona no nosamborin'ny polisy tamin'ny famonoana.
Nandritra ny tapa-bolana lasa izay, nanery ny governemanta sy ny fampitam-baovao hifantoka momba ny olana ity tranga ity sy ny famonoan'olona iray hafa , niaraka tamin'ny andianà fanolanana miisa folo tany amin'ny faritra Haryana. Vehivavy an-jatony no niharan'ny herisetra ara-nofo nataon'ny jiolahimboto nandritra ny alin'ny taombaovao taona 2017 izay nitarika hetsi-panoherana goavana nanerana ny firenena.
Tsy zava-baovao ny olan'i India momba ny fanolanana sy ny herisetra atao amin'ny vehivavy. Nanomboka tamin'ny taona 2001, tranganà heloka bevava atao amin'ny vehivavy miisa 143.795 no notaterina ary nanatri-maso ny fitomboan'ny herisetra isan-taona atao amin'ny vehivavy i India satria dia nahatratra tranga miisa 337.992 izany tamin'ny taona 2014. Ary niha-nitombo hatrany ny tarehimarika nahitana vehivavy sy ankizivavy niha-maro kokoa tonga nitatitra ny tranganà herisetra ara-nofo sy fanolanana.
Mandritra izany, maro no mbola manontany ny antony tsy naha-taitra an'i India momba an'ilay famonoana an'i Asifa tao Jammu sy Kashmir. Nahoana no nisy ny famerana tatitry ny fampitam-baovao an'ity heloka bevava ity? Mbola lavitr'ezaka amin'ny fiarovana ny zo sy ny fiarovana ara-batana ny vahoaka Indiana – indrindra ireo vehivavy sy tovovavy – ny fitsipika sy ny fenitra izay mifehy ny rafitry ny lalàna sy ny fitantanana ao India.